Tanaraid madaraid worldraid
2007-06-08 @ 07:46 in Politika
Ny lohateny hatrany no mety ho teny vahiny fa ny lahatsoratra dia amin’ny teny malagasy mandrakariva. Tsy dia havanana loatra miteny na manoratra teny vahiny manko ny tena na dia mety ho mahazo izay lazainy ihany. Io ve no nandaniana ny androm-pianarana dia tsy hisy tavela na dia kely monja aza ? Ny tsikaritra amin’ny fitetezam-paritra ataon’ny mpitondra moa no tena votoatin’ity lahatsoratra ity. Tsy voatery ho zavatra vao haingana fa izao vao angaha ny fotoana amoahana azy amin’izay.
Zavatra roa no hotantaraiko amin’ity fitetezana an’Iarivo ity. Tsy hoe mitety tanàna mba te-hitsangatsangana ry zareo araka ny fahalalako azy nefa mba nahavariana ihany ny lalana nodiavin’ity fiara misy mialoha sy manaraka ity (cortege). Andro nanambarana ny valin’ny fitsapa-kevi-bahoaka indrindra tamin’izay fotoana izay. Ataoko fa tamin’ny ora niravan’ny fotoam-pitsarana manetriketrika.
Teo Ambohijatovo ambony akaiky indrindra ilay toerana ofisialy nolazaina fa namoanoana ny filoham-panjakana ny Kolonely Ratsimandrava tamin’izay fotoana izay no nosongonan’ity fiara misy mpialoha sy manaraka ity. Amin’ny ankapobeny moa dia matroka ny fitaratra ka tsy ahalalana hoe iza moa no ao anatin’iny fiara iny. Azo ambara kosa fa olona ambony ao amin’ny fitondram-panajakana matoa manan-jo hanana mpiambina sy mpitari-dalana. Avy any Ambatonakanga any izy iny no mihazo toy ny ho any Anjohy. Ny olona mahalala tsara ny eto Antananarivo dia afaka mahavinavina tsara fa tena ao amin’ny tsangambatom-pahatsiarovana ny namonoana ny kolonely voalaza teo aho.
Avy eo raha mbola nidina tamin’iny lalan-kely ambonin’ny lozoka mankany ambanidia iny aho no nahatazana indray ilay fiara sy ny miaraka aminy toa avy any Ankazotokana -Ambanidia any no hihazo an’i Mascotte amin’iny lalana mankany amin’ny Epp Antsahabe sy Epp Ampasanisadoda iny. Izany hoe nandalo ny minimarket sy ny alliance française Antsahabe iny indrindra ireo fiara ireo. Inona no azo tsoahina : azo vinavinaina ho tsy te-handalo ao ambanin’ny lozoka mihazo an’Ambanidia ry zareo. Raha heverina hoe avy any Ambohidahy ny fiara dia mety ho niakatra namonjy ny ambadiky ny Hotel Colbert izy no hitako voalohany. Tsy handalo ny lozoka’Ambohidahy sy ny lozok’Ambanidia izany no tena tanjona sa dia tsy tao an-tsaina izany ?
Mbola tanaraid ihany ary vao tamin’iny herinandro lasa iny. Teny Mahamasina manoloana ny kianjaben’ny Kaominina indrindra aho no nandalo ny mpisava lalana ho an’ny filoham-pirenena. Soavaly vy roa izy ireo no narahina soavaly vy miisa folo teo ho eo. Avy eo dia fiaran’ny prezidansa (4 x 4 mercedes) tokony ho dimy ratsy filahatra be (filahatra minifi-tsofa) no nanaraka dia narahina mpamaran-dalana avy eo. Fiara amina fitaratra matroka avokoa izy dimy ireo. Dia anjaran’ny mpanatrika no maminavina hoe aiza amin’ireo fiara dimy ireo no nandehanan’ny filoham-pirenena.
Io indray dia ny vaovao fanarahantsika no ahalalantsika ny madaraid ataon’ny mpitondra ankehitriny indray. Fony nosokafana sy nampahafantarina ny Madagasikara Am-Perinasa dia nitety ny faritra 22 ry zareo. Nalaza tokoa moa tamin’izany fotoana izany ny tatitra isaky ny avy mandalo faritra iray ny ao amin’ny fitondrana. Nalaza tokoa ny fanentanana tamin’io fotoana io ka tonga avokoa na ny tsy nasaina aza. Hay moa ka nisy fanasana ho an’ireo manana andraikitra any amin’ny faritra any. Nanjary nampalahelo indray ireo tonga avy lavitra nefa karazan’ny nitanin’andro tany ivelan’ny trano malalaka.
Saiky notohizana isaky ny distrika ilay izy fa maty ho azy teo…na tsy nahenoana tohiny intsony. Efa reraka koa angaha ny minisitra tompon’andrikitra ka nanao hoe aoka izay ?
Amin’izao fotoana izao indray dia avy indray ny filankevitry ny governemanta atao isam-paritra. Dia faritra telo aloha no re. Izany hoe raha heverina dia karazandrazany manao ny fihodinana faharoa mitety ny faritra 22 indray ny mpikambana amin’ny governemanta ankehitriny. Filankevitra kely fa tsy toy ny fanao eto Antananarivo loatra. Minisitra vitsivitsy fa tsy voatery ho izy rehetra no mivory any. Fitiavana te-hanome vahana ny faritra tiana hisolo ny fari-piadidiana niantsoana ny faritany taloha.
Ary tsaroanareo moa ilay hoe hisy minisitra isaky ny faritra nolazain’ny filoham-pirenena iny ? Hay ve ka ny minisitra amin’izao fotoana izao ihany no misahana faritra tsirairay avy ! izay no ao Antsainy. Ohatra fantatro izao dia ny minisitry ny asa vaventy Roland Randriamampionona no miandraikitra ny faritra atsimo andrefana. Izany hoe manana andraikitra toy ny hoe minisitry ny asa vaventy sy misahana ny faritra atsimo andrefana ilay minisitra fa tsy misoratra ao amin’ny asany ofisialy io misahana faritra manokana io. Aza manontany ny an’ny hafa fa tsy ho fantatro ny valiny. Hay ve ilay olona tsy voatery ho avy any amin’ny faritra no ao an-tsain’ny filoham-pirenena. Voa mafy indray izay nieritreritra ny « olona avy aty aminay ».
Ity raharaha manga farany ity indray dia an’ny filoham-pirenena manokana aloha no tena fantatra. Nolazaina fa nentina nitety firenena vitsivitsy (Alemaina sy Shina ohatra) ny Madagasikara Am-Perinasa. Mitady fiaraha-miasa amin’ireo firenena afaka miara-miasa amin’ny firenena malagasy. Tany indray vao niteny ny lesoka nananan’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena milaza fa tsy miantraika mivantana amin’ny fampandrosoana akory ny fanampiana ataon’izy ireo. Tsy maintsy mitady ny tombotsoantsika Malagasy rahateo isika na mitady izay ho tombotsoany aza ireo mpandraharaha sy firenena vahiny tiana hiara-miasa amintsika ireo.
Na izany na tsy izany dia lasa ihany ny saiko sao dia tonga amin’ity tononkira ao amin’ny fihirana FFPM ity ny tonombavaka avoakan’ireo mpitondra antsika hoe :
Nivezivezy aho nikaro-java-tsoa,
Izay rehetra hita nandramako avokoa,
Nandany taona maro nanara-tsitra-po,
Kanefa tsy nahazo izay mahafapo ;
Ry raiko feno antra inty ny zanakao,
Ny foko dia mahantra raha lavitra aminao.